Wednesday . 1 April . 2020
မိန်းကလေးတွေ ရင်သားသေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတေ့ ဟော်မုန်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အစားအသောက်၊ ဗီတာမင်နဲ့ အာဟာရဓာတ်ချို့တဲ့မှု၊ အသက်အရွယ် စတာတွေက ရင်သားဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆုံးဖြတ်တယ်။ တခါတရံ ပစ်ကျူထရီဂလင်းနဲ့ သိုင်းရွိုင်ဟော်မုန်း ပြဿနာကြောင့်လည်း ရင်သားကို သေးစေတယ်။ ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ရင် ကုရပိုခက်တတ်တယ်။ ဒီဖက်ခေတ်မှာ ရင်သားကြီးထွားဖို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်တာတွေလုပ်လာကြပါတယ်။ ချက်ချင်းတော့ သိသာပါရဲ့။ တခြားဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ကြည့်ရဦးမယ်။ ဒါ့ကြောင့် အစစအရာရာ နှိုင်းယှဉ်ချင့်ချိန်ပြီးမှ လုပ်သင့်တယ်။နောက်ပြီး ရင်သားကြီးဆေး စားဆေး၊သောက်ဆေး အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ သို့သော် အာနိသင်တွေ ကတော့ တခုနဲ့တခု ကွာခြားနိုင်တယ်။
လေ့လာမှုစစ်တမ်းတွေအရ အမျိုသမီးတယောက်ဟာ ရင်သားကြီးတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ သာမန်မိန်းကလေးတွေထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ပိုမြင့်မားလေ့ရှိပြီး ဆန့်ကျင်ဖကိလိင်ကို ပိုမိုဆွဲဆောငိနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့သတင်းမှာတော့ရင်သားသေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ တပတ်အတွင်း ရင်သားထွားလာအောင် သဘာဝနည်းနဲ့
ရင်သားကြီးထွားဖို့ ဘာအကောင်းဆုံး သဘာဝနည်းလမ်းကတော့
ပဲနီကလေး(lentil) ရင်သားတွေပေါ် နှံ့အောင်လိမ်နည်းပါ။ ဒါကို ရှေးယခင်ကတည်းက ရင်သားကြီးထွားဖို့ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ပဲနီစေ့မှာ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တမျိုးဖြစ်တဲ့ L-tyrosine ဓာတ် ပါတယ်။ နောက်ပြီး အပင်အီစတိုဂျင်တမျိုးဖြစိတဲ့ phytoestrogen ဟော်မုန်းလည်း ပါဝင်သေးတယ်။ အဆိုပါဓာတ်တွေက ရင်သားကို အဓိက ဖွံ့ဖြိုးစေတယ်။
ပဲနီစေ့ ထမင်းစားဇွန်း (၄)ဇွန်းကို ယူပြီး ရေတစ်လက်မခန့် ထည့်ကာ ညလုံးပေါက်စိမ်ထားပေးပါ။(အနည်းဆုံး ၂ နာရီကြာ စိမ်ထားရမယ်)။ မနက်ရောက်တာနဲ့ စိမ်ထားတဲ့ ပဲနီလေးတွေကို စစ်ယူပြီး ညက်နေအောင်ထောင်းလိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ ပဲနီစေ့ paste ကို ရင်သားတွေပေါ် နှံ့အောင်လိမ်းလိုက်ပါ။ (နှိပ်ဖို့မလိုပါ) နာရီဝက်ကြာတဲ့အခါ ရင်သားကို ရေပြန်ဆေးလို့ရပါပြီ။ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ရင်သားကြီးထွားရုံမက ပျော့တွဲနေတဲ့ ရင်သားကိုပါ တင်းရင်းလာစေနိုင်တယ်။
ဂျပန်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ခါးသွယ်ပြီး လှပစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း
ဆွီဒင်၏ တမူထူးခြားသော ကော်ရိုနာ တိုက်ပွဲ
တစ်ပါတ်စာ ၇ရက်သားသမီးများဟောစာတမ်း - 26.3.2020 မှ 1.4.2020 အထိ
သင်ရွေးချယ်မယ့်ကဒ်က ပြောပြနေတဲ့ သင့်အကြောင်းနဲ့ အနာဂတ်